३६ घण्टा नबित्दै संखुवासभा घटन‍ामा प्रहरीलाइ मिल्यो सफलता । – Samriddhakhabar
September 8, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on ३६ घण्टा नबित्दै संखुवासभा घटन‍ामा प्रहरीलाइ मिल्यो सफलता ।
संखुवासभाको मादी नगरपालिका– १ खोला गाउँ टोलमा एकै परिवारका ६ जनाको ज्या’न जाने गरि भएको घ’टनाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
बौद्धमान कार्कीको परिवारका ६ जनाको भएको घट’नाले अहिले सबैको नजर त्यति तानिएको छ । सोहि घरमा आँखा देख्न र कान सुन्न नसक्ने ९३ वर्षीय बौद्धमान भने सकुशल छन् ।
प्रहरीका अनुसार बौद्धमानका छोरा तेजबहादुर कार्की, श्रीमती पार्वती कार्की, बुहारी कमला कार्की, तेजबहादुरकी बुहारी रञ्जना कार्की र तेजबहादुरका नाती विपिन र नातिनी गोमा कार्कीको ह‘त्या भएको हो । स्थानीय शिक्षक योगेन्द्र ओझाका अनुसार मृत’कको श’व घर वरिपरि यत्रतत्र छरिएको थियो ।
संखुवासभा घट्’ना प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीले आफूहरू ‘सकारात्मक दिशामा उन्मुख भएको’ जानकारी दिएको छ। संघीय प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धान प्रगतितिर रहेको जनाएको हो।
‘हामी सकारात्मक दिशा उन्मुख भएका छौं’, एसपी दाहालले भने ‘अहिले श’वको मुचुल्का तयार हुँदैछ। तथ्यहरूको अनुसन्धानबाट हामी पोजेटिभ वेमा छौं।’ श’व उठाउने क्रम सुरू भएको जानकारी दिँदै एसपी कार्कीले अनुसन्धान प्रगति उन्मुख रहेको दाबी गरे।
‘तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिएका छैनौं’, उनले भने। अनुसन्धानमा दाबी गरिएको प्रगति प्रहरी ह’त्या’रा नजिक पुग्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा दाहालले भने ‘अहिले नै त्यसो भन्ने अवस्थामा पुगेका छैनौं। जे जति प्रगति भएको छ, हामी उत्साही छौं। अहिलेसम्मको अनुसन्धान जिरोमा मात्रै रूमल्लिएको छैन।’
प्राय श’वहरु घो‘प्टो परेको अवस्थामा भेटिएका छन्। अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै श’वलाई पोस्ट’मार्टमका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल्याउने भएको छ।
मंगलबार दिउँसो १२ बजेसम्म घटनास्थलबाट श’व उठाएर पोस्ट’मार्टमका लागि अस्पताल पुर्‍याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको बीसीले बताए। उनका अनुसार विकट स्थानमा घट’नास्थल रहेको र बर्खाको समयमा पहिरोले बाटो पनि ठाउँ–ठाउँमा बिगारेका कारण श’व साँझसम्म पनि धरान ल्याइ पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन।
एउटै परिवारका ६ जनाको ह‘त्या भएपछि पूरै गाउँ शो’कमा डु’बेको वडाध्यक्ष खेमनाथ कटुवालले बताए। ‘सिंगो गाउँमा सन्ना’टा छाएको छ। कसैले पनि यस्तो द’र्द’ना’क घटना कसरी भयो होला भनेर सोच्नसम्म सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘घट’ना देखेका र सुनेका छिमेकीहरु कसैको घरमा चुल्हो बलेको छैन। आफ्नो गरेर खाइरहेको सिंगो परिवार नै स’खा’प बनाइएको छ।’ घट’नाको अनुसन्धानमा स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले पनि प्रहरीलाई सहयोग गरिरहेको जानकारी वडाध्यक्ष कटुवालले दिएका छन्।
उनका अनुसार ह’त्या बिहान कि राति नै गरिएको हो भन्ने यकिन हुन बाँकी छ। वृद्धअवस्थाका बौदमानले पनि घट’नाका बारेमा आफूले थाहा नपाएको बताएका छन्। बेलुकासँगै खाना खाएर सुतेको र बिहान हेर्दा श्रीमती (पार्वता)लाई मृ’त फेला पारेपछि छिमेकीलाई खबर गरेको उनले बताएका छन्।
स्थानीय एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘सबैजनाको श’व उस्तै किसिमले घोप्टो पारिएको अवस्थामा भेटिएको छ, त्यसैले यो घटना पे’से’वर अ’प’रा’धीहरूबाट भएको हुनुपर्छ ।’
सासू–बुहारीको श’व खोलामा एकैठाउँ लगभग ख’प्टिए’को अवस्थामा थियो भने बालवालिको श’व खरबारीमा केही मिटरको दुरीमा थियो । घरमा सुतेको बेला बाहिर निकालेर ह’ ‘त्या गरिएको अनुमान गरिए पनि मृत’कका खुट्टामा जुत्ता चप्पल देखिनुले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ । अ’परा’धीले सबैलाई जुत्ता–चप्पल लगाउन लगाएर बाहिर निकालेको जस्तो देखिन्छ ।
प्रहरीले आर्थिक पाटोका कारण घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ। प्रहरीका अनुसार खेती किसानी गर्ने तेजबहादुरको परिवार सामान्य आर्थिक अवस्थाको हो । दुई छोराले विदेशबाट पठाएको केही रकम घरमा थियो ।
घटनास्थल र घर सुरक्षित राखिएका कारण धरानबाट गएको प्रहरी उपरीक्षक भीम दाहाल र फरेन्सिक टोलीले घरभित्र लु’टपा’ट भएको छ कि छैन भनेरसमेत अनुसन्धान गर्ने जनाइएको छ । परिवारको अन्य व्यक्तिसँग रिसिइबी भएको चाहिँ हालसम्म खुलेको छैन ।
दुई बच्चासहित परिवारकै ह’त्या गरिएकाले घटनामा चिनजानकै व्यक्ति सं’लग्न हुन पनि सक्ने प्रहरीको आ’शङ्का छ । आफन्तको बयानका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धानलाई केही साँ’घुरो बनाउँदै गएको प्रहरीको भनाइ छ । अहिले प्रहरीले घट’ना भएको आसपासको समयमा घट’नास्थल वरपर सक्रिय मोबाइल नम्बरहरूको पनि विश्लेषण थालेको छ ।
‘बीटीएस लोकेसनका आधारमा सक्रिय मोबाइलहरुलाई ट्रे’स गरेर हेरिरहेका छौं,’ डीआईजी बीसीले भने, ‘ह’त्यामा भएका व्यक्तिले चलाउने मोबाइलको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) पनि विश्लेषण भइरहेको छ, अनुसन्धानमा सं’लग्न अधिकृतहरूले श’व विभिन्न ठाउँमा भेटिनु र चप्पलहरु यत्रतत्र छरिनुले लखेटेर ह’त्या गरेको हुन सक्ने आशङ्का गरेका छन् ।’
तेजबहादुरका दुई छोराहरू जेठो रमेश र कान्छो नरेश वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसियामा छन्। रमेशकी श्रीमती रञ्जनाको ह‘त्या भएको छ। नरेशकी श्रीमती मुना भने झापामा बस्छिन्। कार्की परिवारले झापामा जग्गा किन्नलाई बैना गरिसकेको पाइएको छ। जग्गा किन्नलाई घरमा पैसा राखेको हुनसक्ने भएकाले सबैको ह‘त्या गरेर लु’टपा’ट गरिएको हुनसक्ने प्रहरीको आ’शंका छ
घरमै बसेर यी महिलाले ५० लाख कमाईन, कसरी त ? थाहा पाउँदा दुनिया चकित।
September 6, 2021 खबर समृद्ध
सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो, कुन गाडीमा कति ?
July 14, 2021 खबर समृद्ध
विनोद चौधरी पनि मन्त्रि बन्दै, यो मन्त्रालय लबिङमा ।
July 13, 2021 July 13, 2021 खबर समृद्ध